के हो जिपिए ? कुन बिषय पढन कति जिपिए चाहिन्छ ? के एसएलसिमा सबै पास हुन्छन् ? – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
छोटो उत्तर – ज्ञानलाइ सहि मापन गरेर पढ्न र सिप सिक्न सहयोग गर्न ।
पहिलाको पास फेल सिस्टमले फेल भएका बिध्यार्थिहरुलाइ उच्च शिक्षा पाउनबाट बन्देज गरेको थियो । तर, ग्रेड सिस्टमले भने जतिसुकै ग्रेड आए पनि कुनै न कुनै विषय पढ्न र सिप सिकेर गरिखाने वातावरण तयार पार्नु ग्रेडिङ प्रणालिको मान्यता भएको शिक्षाविदहरु बताउँछन्।
तर, के अब एसएलसिमा कोहि फेल हुंदैनन ?
छोटो उत्तर – फेल हुन्छन तर फेल भएको भनिदैन ।
प्राविधिक रुपमा अहिलेको जिपिए स्कोर प्राप्तांकलाइ नयाँ ढंगले प्रस्तुत मात्रै गरिएको हो । जिपिए मा रिजल्ट आए पनि यसलाइ सबैले पर्सेंटेजमा परिवर्तन गरेर हेरिरहेका छन् । तेसैले ग्रेड “डि” र “इ” आएका सबैलाइ फेल भएको मानिन्छ । सरकारले पनि “डि” र “इ” आउन्लेलाइ पुरक परिक्षा दिन मिल्ने वातावरण बनाएको छ । यसरि नभने पनि फेल त भएकै हुन । तर, फेल हुंदैमा प्राविधिक वा अन्य प्रशिक्षण लिनलाइ यसले बाधा नपुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
कुन बिषय पढन कति जिपिए चाहिन्छ ?
कलेज भर्ना हुन कम्तिमा पनि ‘डि प्लस’ आउनै पर्छ । तर, ‘डि प्लस’ प्राप्त गर्ने विद्यार्थिलाइ पनि भर्ना पाउँन मुस्किल हुने देखिन्छ । त्योभन्दा कम “डि” र “इ” ग्रेड हुने लाइ व्यावसायिक सिप विकास तथा तालिम केन्द्र (सिटिभिटि) मा प्राविधिक विषयमा तालिम दिने सरकारि निति छ। सिटिभिटिले एक बर्षे देखि माथिका विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले कुन ग्रेड ल्याउने विद्यार्थिले के विषय पढ्न पाउने भन्ने मापदण्ड तोकिदिएको छ। परिषदले कक्षा ११ मा भर्ना हुन विभिन्न १२ विषयमा कम्तिमा कति ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जिपिए) चाहिन्छ भन्ने जानकारि दिएको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका अनुसार गणित र विज्ञान बिषय पढनको लागि ‘सि–प्लस’, अंग्रेजिमा ‘सि’ र सामाजिक शिक्षा तथा नेपालिमा ‘डि–प्लस’ आवश्यक पर्ने बताएको छ।
प्राविधिकतर्फ भने प्रयोगात्मकसहित १० वटै विषयमा “सि–प्लस” ल्याउनुपर्नेछ। उच्चमाध्यमिक विद्यालयको व्यावसायिक संकायमा पढ्न चाहनेले विज्ञान, अंग्रेजी र गणितमा ‘सि’ अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सिटिइभिटिले भने ‘सि’ ग्रेडसम्म ल्याएका विद्यार्थीलाइ भर्ना लिने निर्णय गरेको बताइएको छ। सिटिइभिटिले अनिवार्य अंग्रेजि, गणित र विज्ञान विषयमा ‘सि’ ग्रेड ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको हो। यसका साथसाथै सिटिइभिटिले ‘डि’ र ‘इ’ ल्याउनेलाइ पनि बिभिन्न तालिमको अवसर दिने जनाइएको छ।
This entry was posted in के किन कसरी and tagged SLC. Bookmark the permalink.
← पुर्व मुमा बडामहारानि रत्न अस्पताल भर्ना, राजपरिवारका सदस्य अस्पतालमा
लुटको धन फुपुको श्राद्ध जसरि, सरकारि कोषबाट रकम पाउने भाग्यमानि को को हुन ? →
One thought on “के हो जिपिए ? कुन बिषय पढन कति जिपिए चाहिन्छ ? के एसएलसिमा सबै पास हुन्छन् ?”
90% अायाे भने GPA A+ हुन्छ कि A
A+ 90 – 100 भएपछि
A मा 80 – 89 हुनु पर्ने हैनर